Maitiro ekudzivirira maMail kuti arege kuisa ari kure mapikicha emaemail uye nekudaro kuvadzivirira kuti vatiteedzere isu | Ndinobva mac
Kana iko kushandiswa kwatinoita kwetsamba yedu kusinganyanyo nyanyisa, uye pamusoro pazvo zvese kusiri kwehunyanzvi chero nguva, iko kunyorerwa Meseji yekushandisa inogona kunge iri mhinduro yakanakisa kune vazhinji vevashandisi veMac.Pese patinogamuchira email, nezve zvese kana hazvibvi kuhama dzedu, ingangoita zana muzana yezviitiko, izvi zvinosanganisira mifananidzo.
Iyi mifananidzo, kazhinji, inzira yekutevera iyo inobvumidza iyo inotumira kuziva kana isu tavhura tsamba, kunyangwe Haisi iyo yega nzira yavanofanira kuziva kana tichiverenga maemail kuti ivo vanotitumira nguva dzose, sezvo ivo zvakare vachiwanzo sanganisira akasiyana zvinyorwa kuti vazive kana maemail avo anosvika kwatiri.
Kana isu tichida kuti zviwedzere kuoma, kuburikidza neMeyili isu tinayo yatinogona sarudzo iyo inotibvumidza kudzivirira mifananidzo yese yatinogamuchira muemail yedu kubva kuburikidza nekubatanidza uye izvo zvisina kuverengerwa muemail, zvinoremerwa kana uchitora email. Iko mukana wekudzivirira iyo mifananidzo yemaseva etsamba kubva pakutakura kana uchiverenga maemail anotibvumidzawo kuvhura maemail nenzira inokurumidza, kunyanya kana yedu Internet yekubatanidza isiri kukurumidza zvakanyanya kana isu tichishandisa mwero wedata kubva kune edu tsamba.
Dzima kuisirwa kwemifananidzo iri pamaseva ari kure
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuvhura kunyorera Tsamba.
Ipapo isu tinotyaira kusvika zvido yeMail, iyo yatinogona kuwana kuburikidza neMenu menyu iri mune yepamusoro menyu bar.
Kamwe izvo zvido zvavhurwa, tinoenda kune iyo tebhu Display.
Padanho rinotevera, isu tinofanira kusanzura iro bhokisi Isa zvirimo zviri kure mumameseji.
Kubva panguva ino zvichienda mberi, mifananidzo yese inosanganisirwa mumaemail atinogamuchira inomira kurodha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzivirira maMail kuti arege kuisa kure mifananidzo yeemail uye nekudaro kuvadzivirira kubva pakutitevera
Vana veApple Chitoro vanoenda kunorambidzwa muFrance